Naya Post Nepal | सेल्फी बेचेर करोडपति बने यी २२ वर्षीय युवक
सेल्फी बेचेर करोडपति बने यी २२ वर्षीय युवक
एजेन्सी । संसारका हरेक मानिसको सपना धनी बन्ने र घर, बंगला, कार होस् भन्ने हुन्छ । उसले पैसा कमाउने नयाँ तरिकाहरू खोज्छ। हामी तपाईलाई सेल्फी बेचेर करोडपति बनेको युवकको बारेमा बताउँछौं।
सेल्फी बेचेर ७३३,५०० पाउण्ड (७ करोडभन्दा बढी) कमाइएका यी युवक मात्र २२ वर्षका छन् । एक विदेशी मिडियाले इन्डोनेसियाका यी युवकको सफलताको कथा सार्वजनिक गरेको छ । यस २२ वर्षीय युवकको नाम सुल्तान गुस्ताफ अल घोजाली हो, जसले कम्प्युटर विज्ञान पढ्छन्।
यो केटाले १८ वर्षको उमेरमा एक हजार सेल्फी खिचेका छन् । इन्डोनेसियाका सुल्तान गुस्ताफ अल गोजालीले यति कम उमेरमा मात्रै सेल्फीबाट करोडौं कमाए कसरी ? २२ वर्षीय सुल्तान गुस्ताफ अल गोजालीले ‘गोजाली एभरीडे’ नामक भिडियो प्रोजेक्ट बनाएका छन् ।
मानिसहरूलाई रमाइलो लाग्ला भन्ने सोचेर उनले यो भिडियो बनाएका हुन् । तर, एनएफटीले यो परियोजना र गोजालीका तस्बिरहरू किने। एनएफटी एक डिजिटल प्लेटफर्म हो र ब्लकचेन प्रविधि प्रयोग गरेर किनबेच गरिन्छ। यो भनिन्छ कि क्रिप्टोकरेन्सीहरू र एनएफटी विशेष प्लेटफर्ममा खरिद र बिक्री गरिन्छ।
इन्डोनेसियाका यी युवकका तस्बिरहरू एनएफटीका सङ्कलनकर्ताहरूले किनेका हुन्। गोजालीले एनएफटीको लिलामी साइट ओपन सि मा क्रिप्टोकरेन्सीको लागि आफ्नो सेल्फी बेचे। उनले आफ्नो सेल्फी कसैले किन्नेछन् भन्ने सोचेको पनि थिएन । यी सेल्फीको मूल्य ३ डलर राखिएको उनले बताए ।
यसपछि एक सेलिब्रेटी शेफले यी सेल्फीहरू किनेर सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरे, त्यसपछि ४०० भन्दा बढी मानिसले यी फोटोहरू किनेका थिए। अहिले गोजालीले करोडौं रुपैयाँ कमाइसकेका छन् तर परिवारलाई भने यसबारे जानकारी दिएका छैनन् । ट्विटरमा सुल्तान गुस्ताफ अल गोजालीलाई ४० हजार मानिसले फलो गरेका छन् ।
२२ वर्षीय यी विद्यार्थीले केही दिनअघि कर बुझाएका थिए । एनएफटी के हो थाहा छ ? सन् २०१४ मा पहिलो पटक टोकन एनएफटी ले जनताको ध्यान तान्यो । यो एक फरक प्रकारको अपरिवर्तनीय डाटा हो र यो वास्तविक संसारमा पनि देखिने छ।
यसमा मानिसहरूले क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोग गर्छन्। मूल प्रतिलिपि डिजिटल कला क्रिप्टोकरेन्सी मार्फत खरिद र बिक्री गरिन्छ। सबै डिजिटल कलाको आफ्नै कोड छ।
२०७८ माघ १२, बुधबार प्रकाशित0Minutes 107 Views